Madaxweynaha Somalia oo ka hadlay maalinta Haweenka | WARARKA PUNTLAND
Home Wararkii Hore akhriso Madaxweynaha Somalia oo ka hadlay maalinta Haweenka
Madaxweynaha Somalia oo ka hadlay maalinta Haweenka
Madaxweynaha dowladda Federalka Somalia, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka hadlay xuska maalinta haweenka Adduunka oo ku beegan maanta oo taariikhdu tahay 08 March.
Qoraal kooban oo soo dhigay Bartiisa Twitterka ayuu mudane Farmaajo Hambalyo ugu diray dumarka ku nool dunida gaar ahaan Kuwa Somaliyeed isagoo ammaan kala dul dhacay doorka ay ku leeyihiin bulshada dhexdeeda.
Farmaajo ayaa xusay in haweenka Somaliyeed ay yihiin hal doorka bulshada, wuxuuna ku sifeeyay “Dayaxa”, isagoo ka marag kacay inaan la qarin karin kaalinta ay ku dhex leeyihiin shacabka.
Inkastoo uusan faah faahin ka bixin xuska loo dhigayo maalinta oo kusoo aaday xilli adag, hadana Madaxweynaha Somalia ayaa muujiyay inuu maqsuud ka yahay hormarka ay ku tallaabsanayaan haweenka iyo buuxinta kaalintooda ku aadan hormarka, dhismaha dalka iyo maaraynta qoyska.
Inta badan maalintan oo kale, waxaa dunida lagu qabtaa fantasiyo waaweyn oo lagu taageerayo maalinta haweenka, waxaana la sameeyaa fariimo ka dhan ah in dumarka la waxyeelleeyo.
Dumarka Somaliyeed ayaa tan iyo bur-burkii dowladdii dhexe ee milatariga la daalaa dhacayay dhibaatooyin isugu jira, colaado, abaaro iyo waxyeello inta badan kasoo gaartay bulshada, halka iyagu u guntadeen inay maareeyaan nolosha ubadan oo aabayaashood buuxin waayeen doorkoodii halka kuwa kale dhexda u xirteen korinta ubad aabayaashood geeriyoodeen.
This post has already been read 49324
Previous articleFaah faahin Kulanka Farmaajo iyo Gutters
Next articleXildhibaan katirsan Barlamanka Puntland oo qarax lala eegtay